Naliphi na ixesha esicinga ngayo ukwenza nasiphi na isondlo kwiimoto zethu, amathuba okulungileyo kuya kufuneka ukuba aphelelwe phantsi. Ukuze ususe ivili, idata kufuneka ibe ubuncinane beesentimitha ezimbalwa ukusuka emhlabeni. Ukutshintsha ioli , kuxhomekeke kwimoto, kuya kufuneka uphakamise imoto ubuncinane inyawo. Ukuphakamisa imoto yinto enye, kodwa loo nto ayaneleyo kumsebenzi okhuselekileyo we-DIY - AKUBA (asikwazi ukuxinzelela oku okwaneleyo) aphinde abeke nayiphi na inxalenye yomzimba wakho phantsi kwesithuthi esixhaswe kuphela ngeje! Ukuba uza kwenza nayiphi na phantsi kweloliwe ephakanyisiweyo, kufuneka ixhaswe ngamajack. Ngaphandle koko, iziphumo zingaba zimbi.
Ngaloo ndlela, siye sabonisana noMbhalo oNgcwele kwaye saqulunqa " iMithetho Eyishumi Yokukhupha Iinqwelo Zakho, " eguqulela ulwimi lwangoku, "Indlela yokuphakamisa nokuxhasa imoto yakho ngokuphepha."
Ukusebenza kunye neBuddy kuKhuselekile kwaye kuNgcacise ngakumbi kunye neFido-Approved. http://mountpleasantgranary.net/blog/images/MIx-confirms-job-has-been-done.jpg
Ngoxa ugcina okanye ulungisa imoto yakho , sebenza nomhlobo ukuba kunokwenzeka. Ukuba nolwazi lwakhe lwezimoto lulungile, kodwa aluyimfuneko. Ukuba ufanele ubafumbathise into enomthi, ibhotile, okanye i-coorked, ityalo-mali efanelekileyo, njengoko kunokukukhuthaza, ukugcina inkampani, okanye ukunika izixhobo. Ukuba kukho imeko engxamisekileyo, umhlobo wakho unokubiza 911 kwaye mhlawumbi ugcine ubomi bakho!
Ipaki kwiNqanaba eliMgangatho
IiJack kunye nejack zimila kuphela umsebenzi, kwaye ubukhulu obufanayo obugcina imoto yakho isitshala ngokuqinisekileyo kwi-pavement iya kukhwela kalula imoto yakho kwi-jack okanye i-jack imele kwi-slope. Hlala ubeka imoto yakho kumgangatho wezantsi.
Njalo Funda iManqaku ukuze uqinisekise iiPositive Lift Points. https://justgivemethedamnmanual.com/toyota/2016-toyota-corolla-owners-manual/
Funda iincwadi zezixhobo zakho zombini kunye nokuphakamisa kwakho nezixhobo ezixhasayo. Zonke izithuthi ziphakanyisile iingongoma zeejack, kunye nokumiswa okuqinileyo kunye neengqimba. Ukuba awunayo incwadana yomnini, qinisa, uthenge enye okanye i-Google yona - unokukwazi ukuyilanda mahhala. Ngokufanayo, funda kwaye uthobele i-Jack kunye ne-Jack yokuma umda wamandla kunye nemiyalelo yokukhusela. Umgaqo omhle wesohlwayo olandelayo ukusebenzisa i-jack kunye ne-jack limi kunye namandla okuba ubuncinane ubuncinane be-50% ubunzima bemoto yakho.
Hlanganisa i-Gear yakho
Ngokuxhomekeke kumsebenzi osondeleyo, ungadinga ukuphakamisa ivili elinye, isiphelo sangaphambili okanye umva wokugqibela, okanye yonke imoto. Hlanganisa ukuphakanyiswa kwakho kunye nokuxhasa izinto. Phakamisa imoto yakho ngejack esemgangathweni . Ukuba uphakamisa umgca omnye wemoto yakho, uzakufuna amajack amabili. Ukuba uphakamisa yonke imoto, sebenzisa ijeki ezine. Kwihlabathi elithambileyo, njenge-asphalt okanye utshani, i-plywood eninzi inokubathintela ukuba bangabikho.
Faka ukutshintshwa kwegesi okanye epakini, kwaye ukhethe ivili ngokubhekiselele apho uphakamisa khona. Sebenzisa ii-chocks ezimbili, phambi nangemva kwevili, ukugcina imoto ingaqhubeki phambili okanye ibuyele emuva. Iiplastiki, izitye, iirubha, okanye ukunyuka kwamatye zonke izinto ezilungileyo. Imiqobo, ibhloko, kunye nezitena azinjalo ezikhethiweyo ezintle, njengoko zichithwa okanye zidibene.
Phakamisa Imoto Yakho
Soloko usebenzisa Indawo yokuKhusela ekhuselekileyo kwiJack Up Car. http://www.gettyimages.com/license/695075296
Yiphakamisa isithuthi usebenzisa i-jacking point, ukushiya indawo eyaneleyo yokumisa imoto ukuxhasa imoto. Ukuba ukuphakamisa ivili elinye nje, ukuphakamisa nje ikhoneni lesithuthi yinto efanelekileyo. Ukuba uphakamisa yonke iphambili okanye ngasemva, khetha i-jack kwindawo ephambili okanye ukumiswa kwangaphambili okanye ifreyimu.
Ukuxhasa Imoto Yakho
Ayikho into enjengeyoMninzi uJack Stands. https://c2.staticflickr.com/4/3597/3674527719_bace6d9d14_b.jpg
Ukuxhasa isithuthi nge jack limi. Ukuba uncedisa ikona enye yesithuthi, faka i-jack imele phantsi kwendawo yokugaya kwaye ulungele ukuphakama, uyikhiye endaweni kunye nepini okanye i-pawl, njengoko kusebenzayo. Ukuba uxhasa yonke iphambili okanye isemva kwe sithuthi, sebenzisa i-Jack imi emibini, ibekwe ngokufanelekileyo kwaye ivalwe ukuphakama okulinganayo. Ungasebenzisi iibhloko zeenkuni ukuze ufumane ukuphakama okungaphezulu, njengebhokisi lomthi lingaphuma okanye lihlukanise - lithenga i-jack ende. Yinciphisa i-jack ngokukhawuleza kude kube yimalindo epheleleyo yemoto ehlala ejack.
Ukuba uphakamisa yonke imoto, phakamisa uphinde uxhase phambili phambili, kwindawo ephakamileyo ephezulu enekhono lakho nejack. Emva koko uphakamise uphinde uxhase umva we sithuthi, usebenzisa i-jack yesibini yeejack.
Hlola nganye iJack Stand
Njalo Qaphela ukuba iiJack Stands zixhasa ukulingana kweCar. http://www.gettyimages.com/license/486854829
Hlola ukuba i-jack stand ixhasa isithuthi-akufanele ihambe xa uyigubungela. Ukuba kukho ukunyakaza, jack ikhonkco kwakhona kwaye uhambise i-jack imise inotshi. Khangela ngokuphindaphindiweyo ukuba zonke i-jack zimele zikhiyiwe zichanekile ngokufanelekileyo.
Gubungula ngokusesikweni isithuthi ukuqinisekisa ukuba sikhuselekile. Hlola ukuba zonke izitya ze-jack zityalwe phantsi phantsi kwaye zingagudluki xa ushukumisa imoto. Ukuma kwejack ekhonjiweyo kungawa, njengoko kungenzelwe ukugcina umthwalo kwi-angle. Xa imoto yakho idlula ukuhlolwa koxinzelelo, kukhuselekile ukusebenza kwimoto yakho .
Qalisa kuphela ukuSondeza okanye ukulungiswa kunye neCar ngokuqinisekileyo exhaswe kwiJack Stands. http://www.gettyimages.com/license/91209181
Iimpawu, abathanda, i-DIYers, kunye nabantu ngokukhawuleza banokonakalisa izithuthi, baze babulala okanye bazibulale okanye abanye abantu, ngenxa yokudlula le nyathelo elikhuselekile lokukhusela! Kungakhathaliseki ukuba unamava okanye njani usebenze ngokukhawuleza, ungalokothi ukhohlwe ukuxhasa imoto yakho ngokufanelekileyo, rhoqo xa ufuna ukuphakamisa imoto yakho.
Njengoko ubulumko bubeka:
"Ungeke ubeke i-corse yakho kwimeko yezinto ezimbi, ukungafuni ukukhusela i-jack, hleze unqabiseke kakhulu inzima njengoko inqwelo yenqwelo yakho ikubetha ekuhambeni kwakho kwemimiselo ye-physics, oko kukuthi, yond inyama yakho namathambo akho unamandla kunene inqwelo yakho. "
Hlola i-Oyili Yakho ngokulula
Yintoni oyenzayo xa i-Car yakho ingayi kuqali okanye iguqule
Fundisa i-Ballet Yakho encinane
Usuku Lwasekhaya Lwebusuku
Funda iNdaba kaChuuken Hachiko